दृष्टिविहीनसित केको दुश्मनी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
माघ १०, २०७६ सम्पादकीय
काठमाडौंका सडकहरूमा हिजोआज दृष्टिविहीनहरूले निर्बाध गीत गाएर माग्न पाउँदैनन् । महानगरको आदेशमा आएका प्रहरीहरूले उनीहरूको माइक र स्पिकर खोस्छन्, झपार्छन् र आइन्दा यसरी सडकमा नगाउन चेतावनी दिन्छन् । महानगरले बुधबार मात्रै रत्नपार्क र सुन्धारा क्षेत्रका सडक छेउमा गीत गाउने सात दृष्टिविहीन समूहको माइक र स्पिकर खोसेको छ ।
त्यसपछि ‘ह्वाइट केन’ को सहारामा महानगरपालिका पुगेको दृष्टिविहीनको समूहलाई त्यहाँका कर्मचारीले सडक छेउछाउमा गीत गाएर नमाग्न सतर्क गराएका छन् ।
सडकबाट उठाइएका दृष्टिविहीनले सोधेका छन्, ‘हामीलाई उठाएर सरकारले के पाउँछ ?’ सरकारसित यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । सडकमा गीत गाएर माग्न नपाइने र यस्तो काम कानुनविपरीत हुने महानगरको जिकिर छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२६ मा सडकमा बसेर भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने व्यवस्था छ । महानगरले कानुनको यही व्यवस्थामा टेकेर दृष्टिविहीनमाथि अन्यायपूर्ण दृष्टि राखेको छ । महानगरपालिकाले गत मंसिर २९ मै सडकमा बसेर गीत गाउनेहरूलाई विकल्प खोज्न भन्दै अटेर गरे पक्राउ गरिने चेतावनी दिएको थियो । त्यही दिन प्रहरी परिसर काठमाडौंले बौद्ध परिसरबाहिर माग्न बसेका र गीत गाइरहेका करिब २२ दृष्टिविहीनलाई पक्रेको थियो ।
यो भिडियो पनि पनि हेर्नुहोस् :
वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै ‘सहर व्यवस्थित बनाउने’ नाममा कानुनको एउटा टेको टेकेर महानगरले मानवताको खम्बा भाँचेको छ । सरकारले चाल्ने कदम त दृष्टिविहीनको हितमा पो हुनुपर्छ । उनीहरूलाई चित्त बुझाएर मात्रै सडकबाट हटाइनुपर्छ । आखिर, उनीहरूले के–के न अपराध गरेका पनि होइनन्, राज्यलाई ठूलै हानि हुने गरी कुनै कानुन मिचेका पनि होइनन् । सडकमा आफ्नो कला देखाएर ‘माग्ने’ प्रचलन संसारमा जहाँतहीँ छ, यो काठमाडौंमा मात्र नौलो होइन । फेरि, उनीहरू चिच्याएर, कसैको पिछा गरेर जबर्जस्ती कोट्याएर माग्ने पनि गर्दैनन्, कुनै थलोमा बसेर आफ्नो प्रतिभा देखाएर मनकारीहरूसित भाँडो थाप्ने मात्रै हुन् । एक हिसाबले उनीहरूले मागेको भन्दा पनि आफ्नो प्रतिभा बेचेका हुन्। व्यावसायिक गायक–गायिकाभन्दा फरक यति हो, उनीहरूले प्रतिभा बेच्ने मञ्च सडकपेटीलाई बनाएका छन् ।
सरकारले बुझेजस्तो जारी नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउनका लागि सबभन्दा ठूलो अवरोध सडकमा गाएर माग्न बसेका दृष्टिविहीनहरू होइनन् । पर्यटकहरूलाई नमज्जा धूलो उडिरहेको, जताततै फोहोर थुप्रिरहेको र खाल्डैखाल्डा भएको सडक देख्दा लाग्छ कि पेटीमा गीत गाएर मागिरहेका दृष्टिविहीनहरू भेट्दा ? पर्यटकहरूलाई दुःख मिटरमा जान नमान्ने र लाग्दोभन्दा बढी भाडा लिने ट्याक्सी अनि आउने–जाने ठेगान नहुने र कोच्चिएर यात्रा गर्नुपर्ने सार्वजनिक माइक्रो/बस देख्दा लाग्छ कि सडकमा माग्नेहरू भेट्दा ? सायद सरकार यसमा अलमलमा छ, उसले सही खुट्याउन सकेजस्तो देखिँदैन ।
सहरलाई सहरजस्तै बनाउने अनि पर्यटकहरूको चित्त आकर्षित गर्ने सयौं उपाय छन्, सरकार ती सबै बाटाहरूलाई छोडेर निरुपाय भई सडकमा आएकाहरूलाई हतोत्साही गर्न लागिपरेको छ, जुन शोभनीय र मानवोचित दुवै देखिँदैन । यी दृष्टिविहीनहरूले भनेका छन्— हामी गरिखाने कुनै विकल्प नभएर सडकमा आएका हौं, सडकको धूलो खाने रहरले होइन । यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई हठात् सडकबाट हटाउने भन्दा पनि सडकसम्म आउनै नपर्ने विकल्प पो दिनुपर्छ । सरकारले त्यस्तो वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले दृष्टिविहीन खुसी होउन्, उनीहरूको परिवारले भरोसा पाउन् र सडक पनि सरकारले चाहेजस्तै होओस् ।
महानगरपालिकाले काम गरेर खान नसक्नेलाई आश्रममा राखेर खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाइदिने त भनेको छ । तर, घरपरिवार भएका कतिपय दृष्टिविहीनहरूलाई त्यति गर्नु मात्रै समाधान होइन, उनीहरूमा आश्रित परिवारबारे पनि सोच्नुपर्छ । सडकमा बसेर गीत गाउने दृष्टिविहीनका अनुसार उनीहरूको संख्या करिब दुई सय छ । अधिकांश कमजोर आर्थिक हैसियतका र गीत गाएर जम्मा भएको पैसाले गुजारा चलाउने छन् । त्यसैले, आश्रित परिवारलाई धान्न सक्ने गरी विकल्पको व्यवस्था नगरी सरकारले दृष्टिविहीनहरूलाई सडकबाट चलाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
उचित विकल्प नदिई गरिखाने मेलो बन्द गरिदिनु कानुनको कुनै एउटा दफाअन्तर्गत सही भएको व्याख्या गर्न सकिएला, तर लोक कल्याणकारी राज्यको मर्म र समाजवादउन्मुख संविधानको भावनाअनुकूल ठहर्‍याउन सकिँदैन । पूर्ण दृष्टिविहीनहरूले सरकारबाट मासिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् तर त्यतिले उनीहरूको गर्जो टर्दैन । त्यसैले, सरकारले उनीहरूका लागि कि रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पुग्दो भत्ता दिनुपर्छ अनि मात्रै सडक खाली गर भन्न सुहाउँछ ।
प्रकाशित : माघ १०, २०७६ ०७:५६